Qaybta 504 | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waalidiinta, macalimiinta, ardayda, shaqaalaha iskuulka, iyo / ama wakaaladaha bulshada ayaa sameyn kara gudbinta qiimeynta 504. Dhisida shaqaalaha 504 waxay siinayaan waalidiinta Ogeysiiska Nidaamka Badbaadinta iyo u Gudbinta Ardayda Qaybta 504 .
Kaddib marka la helo gudbinta oo dib loo eego, Kooxda 504 waxay ogeysiinaysaa waalidka / ilaaliyaha talaabooyinka soo socda ee dugsiga qaadi doono:
Ku sii wad barnaamijka hadda socda
Hirgalinta waxqabadyada lagula taliyay
Samee qiimeyn 504 ah
Tixraac qiimaynta Waxbarashada Gaarka ah
Codso macluumaad dheeri ah ama caddeyn
Haddii qiimeyn 504 la soo jeediyo, dugsiga ayaa bixin doona foomka Oggolaanshaha Qiimeynta . Qiimeyntu ma socon karto ogolaansho la saxiixay mooyee.
Ka dib markay helaan ogolaanshaha la saxeexay, shaqaalaha dugsiga waxay ku dhammaystiraan Soo-koobid Qiimeyn iyo Go'aaminta U-qalmitaanka waqtiga habboon *. U-qalmitaanka Go'aamintu waxay noqon kartaa mid ka mid ah kuwan soo socda:
Ardaygu naafo ma aha, sida ku qeexan Qaybta 504
Ardaygu xaq buu u leeyahay badbaadin sida ku xusan Qaybta 504, laakiin hadda uma baahna wax ka beddel barnaamij (Qorshe 504)
Ardaygu wuxuu xaq u leeyahay in la ilaaliyo sida ku cad Qeybta 504 IYO Baahida barnaamijyada (Qorshaha 504) si loo hubiyo takoor la'aan
Waalidiinta ama wakiilka waxaa la siiyaa Soo-koobidda Qiimeynta iyo Go'aaminta U-qalmitaanka iyo Qorshaha 504, halka ay ku habboon tahay. Ogsoonow: In kasta oo aan loo baahnayn kulan kooxeed, waalidka / ilaaliyaha ayaa codsan kara kulan.
Foomamka Dheeraadka ah
Oggolaanshaha Siidaynta Macluumaadka
Su'aalo, ama Walaacyo
Haddii khilaafku ka dhasho qiimaynta, u-qalmitaanka, ama adeegyada Qaybta 504, fadlan la xiriir Isu-duwaha dhismaha ee 504 ee ilmahaaga (oo leh xiriir lala xiriirayo macluumaadka websaydhka). U dir tixraaca nidaamkaaga iyo hab-maamuusyada Cabashada wixii macluumaad dheeraad ah.
* Fadlan Ogsoonow: Qaynuunka 504 ma siinayo waqti go'an oo lagu dhammaystirayo qiimeynta ardayda. OCR waxay isticmaashaa tilmaamaha gobolka si ay u go'aamiso haddii qiimeynta si habboon loo qabtay, taas oo caadi ahaan ah 30 illaa 45 maalmood ka dib gudbinta.
Maamulka Degmada Qaybta 504
Qaybta 504 /